Isango lensimbi elenziwe ngokwezifiso igceke le-villa isango
Uma ufuna iminyango yensimbi ebunjiwe ekhanyayo neqinile yekhaya lakho; Mhlawumbe umnyango oseceleni wengadi yakho noma wegceke. Singasebenza nawe ukuze siklame umnyango wensimbi omgunyathi ukuze sikunikeze ukuvikeleka okwengeziwe kwekhaya lakho. Abaklami bethu abanolwazi bazonikeza iziphakamiso mayelana nokusetshenziswa kwensimbi ekhonjiwe kuphrojekthi yakho.
Ubuchwepheshe bethu emikhiqizweni yensimbi eyenziwe ngezandla buye basenzela idumela elithembekile emkhakheni wezohwebo. Sisebenzisana nezinkampani zokwakha izindlu kwezinye izifunda namazwe ukuhlinzeka ngobuciko bensimbi obungokwezifiso ezindlini, ezindlini zokuhlala, ezakhiweni zezentengiselwano, izikole, amakolishi, amanyuvesi, izibhedlela nenxanxathela yezitolo.
Sinikeza iminyango yensimbi eyakhiwe ehlukahlukene ngokubukeka kwesimanje namandla aphezulu. Ububanzi obunikeziwe buhambisana nesakhiwo sesimanjemanje sezakhiwo futhi silungele ukufakwa
Singakwazi ukukhiqiza isango lensimbi elenziwe ngokwezidingo/umdwebo wekhasimende.
Iqinile futhi ingagqwali.
Iphakheji engcono kakhulu
Xhumana nathi namuhla ukuze uthole ikhotheshini yamahhala yamasango akho ensimbi. Siphinde sibe nohlu olubanzi lwezinsimbi zensimbi ezikhandiwe, amabha, obhasikidi, ama-rosette, amakholomu, imiqulu, njll. ukuze kuhambisane nanoma yimuphi umklamo.
Okwedlule: Uthango lwensimbi yokuvikela ukuphepha kwendlu yasegcekeni
Olandelayo: Idiphu elishisayo lensimbi enamahalavu ensimbi ewutshani waseKraal mesh
Isihlungi se-cartridge yensimbi engagqwali yangokwezifiso...
Imidiya Yesihlungi: Insimbi Engagqwali enemeshi elukiwe noma ifayibha yensimbi ene-sintered Insimbi engagqwali i-sintered fiber ezwakala iyimbobo yesihlungi sekhekheba lezinyosi enezinga eliphezulu lokuhlunga. Futhi iwuhlobo oluqinile futhi olukwazi ukuncenceza, ukuncenga okwanele kungathola indawo enkulu yokuhlunga. I-Sintered esakhiweni se-pore esilinganiselwe, ijabulela izinzuzo zezinga eliphezulu le-porosity, indawo yokuhlunga kakhulu, umthamo ophezulu wokubamba ukungcola futhi ingasetshenziswa ngokuphindaphindiwe. Insimbi engagqwali elukiwe indwangu yenziwa ngokwelukwa kwe-stai...
Ikhatriji yesihlungi yensimbi engenasici engu-304/316 yangokwezifiso
Isihlungi se-cartridge impahla 304, 304L, 316, 316L insimbi engagqwali punching mesh, mesh elukiwe, i-electric welding mesh, mesh yethusi, i-aluminium foil mesh, njll. ukuhlungwa okuhle kwezinhlayiya ezingu-1-500um noketshezi, nokugeleza okukhulu endaweni ngayinye yeyunithi, futhi kungasetshenziswa kabusha ngemva kokuhlanza. Inqubo yokukhiqiza ye-cartridge yokuhlunga Ngemva kokusika ipuleti - ukuzungeza - Ukushisela ...
I-Hydrochloric acid ukumelana ne-Monel 400 alloy mesh
Izici zesikrini sesihlungi sensimbi engagqwali 1. I-asidi enhle, i-alkali kanye nokumelana nokugqwala; 2. Amandla aphezulu, amandla aqinile aqinile, ukuqina nokumelana nokugqoka, okuhlala isikhathi eside; 3. Ukumelana nokushisa okuphezulu kwe-oxidation, izinga lokushisa elingu-30 lensimbi engagqwali lingafinyelela ku-1150 ℃; 4. Ukucubungula ukushisa okuvamile, okungukuthi, ukucutshungulwa kwepulasitiki okulula, ukuze ithuba lokusebenzisa isikrini sensimbi engagqwali kuhluke; 5. Isiphetho esiphezulu, akukho ukwelashwa okungaphezulu, ukugcinwa okulula nokulula kwe-Mat...
Ukuhlunga Koketshezi Lwezimboni kwe-304/316 Stain...
Ahlanganisa izindlu zokuhlunga, izinto zokuhlunga ezisekelwa amakheji anezimbobo, kanye nezinhlelo zokuvala uphawu ukuze kugwenywe noma yikuphi ukudlula kanye nokuxhumeka kokuphela okungakhethwa. Izinto zokuhlunga: Izinto zokuhlunga ubhasikidi zihlanganisa ishidi elinezimbobo zensimbi engagqwali, inetha elilukiwe lensimbi engagqwali kanye nendwangu kasilika yensimbi engagqwali. Mayelana nobukhulu kanye nebanga lokuhlunga, singahlinzeka ngemikhiqizo ngokwezidingo zamakhasimende. Isicelo: isihlungi sikabhasikidi siyinhloko...
Isihlungi sepayipi legesi yemvelo - isihlungi se-conical
Ingasetshenziswa futhi ukuvikela ama-compressor, amaphampu, ama-turbines nama-valve e-solenoid. Isihlungi se-Conical sinamandla aphezulu, ukuqina okuhle nokusebenza kahle kokuhlunga. Ukusebenza okuzinzile kungaqinisekisa ukusebenza kahle kwemishini yokukhiqiza nokuvikela amaphampu, ama-valve nezinye izinto zokusebenza. Uhlobo lomkhiqizo: isihlungi esikhonjiwe esingezansi esikhonjiwe, isihlungi esiyikholi esiphansi esiyisicaba, isihlungi se-conical esigqokwayo, isihlungi esiyikhonika esilukiwe. Material: wire mesh sintered, insimbi engagqwali wire mesh, ithusi aluminium...